ज्यानै लिने कालो ढुसी के हो? कसरी बच्ने? – Health Post Nepal
२०७८ असार ७ गते १६:१८
नेपालमा पछिल्लो केही दिनको तथ्यांकअनुसार म्युकोरमाइकोसिस,(कालो ढुसी) का बिरामी बढ्न थालेका छन्। कोरोनाको लहर न्यून हुँदै जाँदा कालो ढुसीको त्रास बढेको छ।
भारतमा पछिल्लो समय यो बढीमात्रामा देखा परिरहेको छ। नेपालमा पनि हालसम्म दजनौं यसको संक्रमण देखिएको छ।
कोरोना संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूले आफू खुसी औषधी सेवन गर्दा पनि यो रोगले समस्या निम्ताएको देखिन्छ।
जब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ तब यो समस्याले मानिसहरूलाई सताउन सक्ने सम्भावना बढ्छ।
सामान्यतया रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मधुमेहका बिरामी, अंग प्रत्यारोपण, क्यान्सर, मृगौलाको डाइलासिस गरेका व्यक्तिमा कालो ढुसीको जोखिम बढी हुन्छ। त्यसकारण कोरोना संक्रमित भएर घरमै होम आइसोलेनमा बसेकाहरूलाई चिकित्सकको सल्लाहविनै आफू खुसी जथाभावी औषधी नखान अनुरोध गर्ने गरेका छन्।
यसबारे वीर अस्पतालका नाक, कान, घाटी रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठसँग हेल्थपोष्टका अशिम सापकोटाले कुराकानी गरेका छन्
म्युकरमाइकोसिस के हो?
म्युकरमाइकोसिस भनेको एक प्रकारको कालो ढुसी हो। यो हाम्रो वरपर रहेका कुहिएका वस्तुका कारण हुने गर्छ। कालो ढुसी रोगका संक्रमितहरुमा आँखा, नाकमा फंगस अर्थात ढुसीको इन्फेक्सन देखिने गर्छ। विशेषगरी मधुमेह, किमोथेरापीको प्रयोग, अंग प्रत्यारोपण गर्दा उपचारको क्रममा लामो समयदेखि स्टेरोइड औषधिको प्रयोगका कारण शरीरमा इम्युनिटी पावर कम भएका समूहहरुमा यस्तो समस्या देखा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। कोरोना भाइरस निको भएका बिरामीहरुमा यसको प्रभाव पछिल्लो केही दिनयता निकै उच्च संख्यामा देखिएको छ।
प्रा. डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ
कालो ढुसीको लक्षण कस्तो हुन्छ?
अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण भएर निको भएको केही समयपश्चात कालो ढुसी समस्या देखिने गरेको छ। सामान्यतस् यसको लक्षण नाक बन्द हुने, नाकबाट पहेँलो सिगान आउने, कालो सिँगान आउने, आँखा वरीपरीको भाग सुन्निने, टाउको दुख्ने, दाँत दुख्ने, हल्लिने, दृष्टि कमजोर हुने, मुखमा घाउहरु आउनेजस्ता समस्याहरु देखिने गर्छ।
यसले पछि कस्ता किसिमको समस्या उत्पन्न गर्नसक्छ?
म्युकरमाइकोसिस सर्वप्रथम नाकबाट प्रवेश गरी नाकको हड्डीहरु कुहिएर झर्ने र आँखाको दृष्टिमासमेत यसले नराम्रो असर गर्छ। आँखा कुहिने र ब्रेन हेम्रेज गर्ने, रगत जमाउनेजस्ता समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ।
नेपालमा कालो ढुसीबाट किन खतरा छ?
नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा आएको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यसको संक्रमण महामारीकै स्वरुपमा देखा परिरहेको छ। यसले मृत्यु पनि उत्तिकै बढाइरहेको छ। कोरोना संक्रमण निको भयो भनेर लापरबाही गर्दा कतिपयले आफ्नो शरीरको आँखा, नाक काट्नु परेको अवस्था छ।
भारतमा चिकित्सकको परामर्शविना स्टेरोइडको प्रयोगले गरिएको छ। त्यसकारण कोरोना संक्रमित भएर घरमै होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई म आफू खुसी जथाभावी औषधी नखान अनुरोध गर्छु।
कतिपयले यो समस्या नयाँ हो भन्छन त?
यो समस्या धेरै पहिलादेखिकै हो।नेपालमा कोरोना भाइरस आउनुभन्दा पहिला पनि थियो। अहिले भारतमा हजारौंभन्दा बढीमा यो समस्या देखिएको छ। वीर अस्पतालमा कार्यरत रहँदा मेरो अनुभवमा पनि एकदेखि दुई वर्षमा एकरदुईजना बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको छ। भारतको जस्तो छैन। आगामी दिनमा यो संक्रमण अझ बढ्छ भनेर हामी सजग भएका छौं।
म्युकरमाइकोसिस रोगको उपचार पद्धती कस्तो छ?
यसको उपचार पद्धती दुई किसिमको हुन्छ। एउटा, असर भएको भागलाई काटेर निकाल्छौँ र निकालेको केही समयपछि इन्ट्राभेनस एन्टीफंगल ड्रप एन्फोटेरिसिन बीु प्रयोग गर्छौं। अहिले वीर अस्पतालमा दुईवटा केस आएको छ। एउटा गर्‍यौं र अर्को गर्ने तयारीमा छौं।
नेपाल र भारतमा देखिएका केसमा के भिन्नता छ?
अहिले वीर अस्पतालमा भर्ना भएको केस र भारतमा देखिएको केस दुवै उस्तै प्रकारको छ। वीरमा पनि कोभिड वार्डमा भर्ना भएका एक कोरोना संक्रमण देखिएका पुरुषमा यसको शल्यक्रिया गरिएको छ। उक्त बिरामीमा मधुमेहको समस्यासमेत थियो। कोरोना संक्रमण देखिएर उनी अस्पताल आएका थिए। ती बिरामी अस्पताल भर्ना भएपछि आँखाको वरिपरी सुन्निने र रातो हुने समस्या देखियो। उनको तुरुन्त एमआरआई गरेर हेर्दा कालो ढुसीको समस्या रहेको पाइयो।
हामीले तुरुन्तै शल्यक्रिया गरेका थियौँ। उनको नाकबाट फैलिएर आँखा नजिक पुगिसकेको थियो। उनको एउटा आँखा बिग्रेको छ। उनको त्यो बिग्रेको आँखामा दृष्टि फर्किने सम्भावना अलिक कम देखिन्छ।
यसको संक्रमण कोरोना निको भएको सामान्यतया ३ देखि ४ हप्तामा देखिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ। तर, हामीले वीरमा शल्यक्रिया गरेका ती बिरामीमा भने शल्यक्रियाअघि गरिएको पिसिआर रिपोर्टमा पोजेटिभ देखिएको थियो।
अप्रेसन गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
नयाँ रोग नभएका कारण त्यस्तो थिएन। तर, कोरोना पोजेटिभ बिरामीको अप्रेसन गर्दा अलिकति बढी सावधानी भने अपनाउनु पर्छ। हामीले पनि त्यसै गरेका थियौं।
यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ कि सर्दैन?
यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैन। यसले कुनै पनि लिंग अथवा महिला(पुरुष भनेर छुट्याउने भन्ने पनि हुँदैन। यो कमजोर शरीरमा देखा पर्छ।
यसबाट बच्ने उपाय के हुन् ?
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि चिकित्सकको सल्लाहविना कुनै पनि प्रकारको एन्टिबायोटिक र स्टेरोइड आफू खुसी प्रयोग नगर्ने। मधुमेह नियन्त्रणमा राख्ने। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आफू खुसी औषधी सेवन नगर्ने। कोरोना निको भएपछि माथि उल्लेख गरेको लक्षण देखिएमा निको भइहाल्छ भनेर बेवास्ता नगर्ने।
अन्तमा केही भन्नु छ कि?
यस्तो समस्या फार्मेसीमा गएर समाधान हुने हैन। सर्वप्रथम मानिसहरु यसबाट सचेत हुन पर्यो। यदि कोही मानिस डायबेटिज भएको छ, कोभिड संक्रमण भएको छ र सुगरको मात्रापनि बढेको छ भने आफनो स्वास्थ्यतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ। फोहोर स्थानमा जान भएन, मास्क पुरानो प्रयोग गर्नु भएन। केही समस्या देखा पर्नासाथ नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु पर्छ।